Kenya oo ku fashilantay Qaraar ay ku cunaqabatayn rabtay Shacabka Soomaaliyeed.
Thursday August 29, 2019 - 11:48:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kulan ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yeesheen xubnaha joogtada ah ee Q.Midoobay ayay ug doodeen qaraar ay golaha ugudbisay dowladda Kenya kaas oo ka dhan ahaa shacabka Soomaaliyeed.
Kenya ayaa doonaysay in lameel mariyo qaraar tirsigiisu ahaa 1267 kaas oo cunaqabateymo kusoo rogayay malaayiin qof oo ku dhaqan Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Kenya ayaa doonaysay in Xarakada Al Shabaab lala meel dhigo Urur weynaha Al Qaacidda taas oo macnaheedu yahay in cunaqabateymo ad adag lagusoo rogo dhammaan shacabka ku nool gobollada shareecada Islaamka lagu maamulo ee Soomaaliya.
Dowlado ay kamid yihiin Mareykanka, Poland,Jarmalka iyo Kuweyt ayaa is hortaag ku sameeyay qaraarka dowladda Kenya taas oo ugu dambeyn keentay in safiirka Kenya ee Q.Midoobay uu waji gabax baahsan la kulmo.
Qaraarkan Lambarkiisu yahay 1267 ayaa dhigayay in xayiraad dhanka dhaqaalaha ah lagusoo rogo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Koonfurta Soomaaliya si Kenyaatigu ay uhelaan awood dhaqaale.
Dowladda Kenya oo kumanaan katirsan ciidamadeedu duullaan ku joogaan Jubbada Hoose iyo Gedo ayaa wajahaysa dhabar jab dhanka melleteriga iyo dhaqaalaha ah waxayna isku dayaysaa in ay ka aargoosato shacabka Soomaaliyeed.
Mareykanka oo qeyb ka ah duullaanka shisheeyuhu kusoo qaaday Soomaaliya ayaa qudhiisa kasoo hor jeestay qaraarka Kenya oo loo arko mid sii xumeyn kara xaaladda Soomaaliya.
Eric Schwartz oo katirsan hay'adaha Q.Midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in soo jeedinta Kenya ay tahay mid aan la aqbali karin, waxaa xusid mudan in Xarakada Al Shabaab horay loogu daray liiska waxa loogu yeero Argagaxisa balse Kenya ayaa isku dayday in ay shacabka Soomaaliyeed cuuryaamiso iyadoo adeegsanaysa marmarsiiyaha Argagaxisa ladirir.
Ciidamada Kenyan ee duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa ku lug leh dhoofinta dhuxusha iyadoo Kenya ay lacago boqolaal Milyan oo dollar ah sanad walba ka hesho dhoofinta dhuxusha ee dekadda magaalada Kismaayo waxayna jebisay qaraarkii UN-ka ee mamnuucayay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya.
Damaca Kenya ayaa ahaa in shacabka Soomaalida aysan adeegsan isgaarsiinta iyo shirkadaha Xawaaladaha taas u dhiganta cunaqabateyn dhaqaale oo si toos ah loo saaro shacabka rayidka ah.
Diblumaasiyiin ku sugan bariga qaaradda Afrika ayaa tallaabada ay Kenya qaadaay u arka mid siyaasadaysan oo ay ku doonayso in ay ku cadaadiso dowladda Federaalka oo uu kala dhaxeeyo khilaaf dhanka xuduud badeedka ah, sidoo kale Kenya ayaa taageero dhan walba ah siisay hoggaamiyaha maamulka Jubbaland oo cadaawad siyaasadeed kala dhaxayso xukuumadda Farmaajo.
Qaraxyo khasaara lagu gaarsiiyay ciidamo Kenyaan iyo Burundeys ah oo ka dhacay Gaarisa iyo Sh/dhexe.